Eigday Heating Sets Mahofisi muNew York …….
Shenzhen Eigday Heating Limited inozivisa kutanga bazi idzva muNew York, United States, zvinoenderana nekodhi yemhando yepamusoro, "inoenderera mberi yekuvandudza uye kukosha kwekugadzira". Iyi nhanho yakatangwa zvinoenderana nezano rekambani, iro rinotarisira kuwedzera bhazi remuno nerekunze ...
Ndezvipi Battery Powered Inodziya Zvigadzirwa
Bhatiri inodziya zvigadzirwa zvinodziisa zvinogona kuchengetedza muviri wako kudziya munguva inotonhora mamiriro ekunze. Anenge ese zvigadzirwa zveMUPONESI zvinopisa-bhatiri-zvinowedzeredzwa, uye kupisa kunogona kugadziridzwa kune yakakwana tembiricha kuburikidza nekiyi bhatani. Inodziya Zvigadzirwa Zvinoshanda Sei? Kune akawanda marudzi uye st ...
Ita Inopisa Gloves Basa
Iyo yakanaka zano kutenga maviri anopisa magirovhusi emitambo yekunze kana mudhudhudhu kutasva munguva inotonhora mamiriro ekunze. Asi magirovhosi anopisa anobatsira here? Vatengi vakatenga kudziisa magurovhosi vane maonero akasiyana pamusoro peizvi. Kukakavadzana kukuru kusakwanisa kupisa zuva rese uye iyo yekudziya renji yakasiyana f ...